[Igceke elilodwa nethala] Indlu yezwe eneminyango egoqwayo, indlu evalelwe i-Heyri Hills 203 - I-Airbnb
[Igceke elilodwa nethala] Indlu yezwe eneminyango egoqwayo, indlu evalelwe i-Heyri Hills 203
Tanhyeon-myeon, Paju-si, Gyeonggi Province, i-South Korea
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-영옥
U-영옥 Ungumbungazi ovelele
Sifuna ukusuka ekubeni indawo enethezekile ukuze uphumule isikhashana, siye endaweni engakukhuthaza ekuphileni kwakho kwansuku zonke. Ngethemba ukuthi kuzoba yindawo lapho singabelana khona ngezinkumbulo ezinhle nabantu abahlukahlukene.
Lena yindlu yezivakashi ezimele etholakala e-townhouse eduze kwase-Heyri. Isitezi sokuqala sendlu enezitezi ezintathu sisetshenziswa kuphela. Uma wehla ngezitebhisi ezingakwesokunxele sesakhiwo, uzothola indawo yokuhlala enengadi enkulu, isitudiyo, kanye nethala. Kukhona omakhelwane abahlala phezulu, kodwa abahlangani futhi bahlukene ngokuphelele ngoba umnyango ungaphesheya.
Ngokusekelwe emgwaqeni wesigodi, ingadi namafasitela avulekele ngakolunye uhlangothi ngemuva kodonga lwesakhiwo, ngakho-ke kuyindawo lapho ungazizwa uthule futhi uzimele. Ngaphambili, kuhlaba umxhwele ukuthi uphahla olubomvu lusezingeni lamehlo, futhi izinkanyezi zibonakala kahle ngosuku olucwathile ngoba azikho izibani eziningi ezivimbela ukubuka njengedolobha ebusuku.
Kunconywa kulabo abahamba ngemoto ezungeze iPaju.
Itholakala endaweni enhle yokuzungeza i-Paju nendawo yokuhlala njengesisekelo.
Imizuzu emi-5 ngemoto: I-Heyri Art Village, iProvence, i-Paju Changeup Campus (eyayiyi-Paju English Village), i-Shinsegae Chelsea Outlet, i-Odusan Unification Observatory, i-Donghwa Gyeongmo Park
Imizuzu eyi-15 ngemoto: I-Complex Yokushicilela, Izitolo zeLotte Premium
Imizuzu engama-25 ngemoto: Imjingak Pyeonghwanuri, DMZ
U영옥 Ungumbungazi ovelele